Manampy anao hahomby »ny serivisy amin'ny tranomboky» University of Hodges
Tongasoa eto amin'ny Library amin'ny Hodges University
Mba hanampiana anao amin'ny filànao, ny Terry P. McMahan Library dia manolotra serivisy sy fitaovana isan-karazany ho an'ny mpianatra, mpampianatra, mpiasa ary alumni ao amin'ny Hodges University.
Manamora ny fahazoanao ny fampahalalana ilainao izahay. Mifandraisa amina manam-pahaizana manokana momba ny lohahevitra hitarika anao amin'ny fikarohana, hitady toerana hianarana samirery na miaraka amina vondrona iray, ary hitadiavana boky, lahatsoratra ary maro hafa hanohanana ny traikefanao. Mijanona kely hitsidika! Eto izahay mba hanampy.
Mitadiava fampahalalana, lahatsoratra, diary, boky, e-boky, sarimihetsika, antontan-taratasy e-governemanta, ary bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fanangonana loharanom-pahalalana miavaka. Betsaka ny entana azo jerena amin'ny Internet avy hatrany. Ny ankamaroan'ny fitaovana ara-batana dia jereo mandritra ny 3-4 herinandro ary havaozina in-2. Ny trosa indram-pandraharahana dia avelao isika hitady fitaovana fanampiny amin'ny saika famoriam-bola rehetra eto amin'ny firenena.
Login amin'ny e-Library